ဆူးများဖြင့် သရဖူဆောင်းခြင်း - Worldwide Church of God Switzerland
ဆောင်းပါး > ဘုရားသခင်နှင့်အတူအတွေ့အကြုံများ > ဆူးပင်သရဖူဆောင်း
စစ်သားတွေက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရယ်မောဖို့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာ ဒီဇာတ်လမ်းကို ယေရှုရဲ့ စမ်းသပ်မှုရဲ့ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ သူတို့သည် ဤဇာတ်လမ်းကို ကမောက်ကမ အမှန်တရားတစ်ခု ပါ၀င်နေသောကြောင့် ဤဇာတ်လမ်းကို ရေးပြနေသည်ဟု ကျွန်တော် သံသယဖြစ်မိပါသည်- ယေရှုသည် ဘုရင်ဖြစ်သည်၊ သို့သော် သူ၏ အုပ်စိုးမှုသည် ငြင်းပယ်ခံရခြင်း၊ လှောင်ပြောင်ခြင်းနှင့် ဆင်းရဲဒုက္ခများရှေ့တွင် ရှိနေလိမ့်မည်။ သူသည် ဝေဒနာနှင့် ပြည့်စုံသော လောကကို အုပ်စိုးသော ကြောင့် ဆူးသရဖူ ဆောင်းလျက်၊ ဤဒုစရိုက်လောက၏ ရှင်ဘုရင်အဖြစ် ဝေဒနာကို ခံစား၍ အုပ်စိုးခွင့်ကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဆူးပင်များဖြင့် သရဖူဆောင်းခြင်းကို ခံရသည်။
ဆူးများ၏သရဖူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်လည်းအဓိပ္ပာယ်ရှိသည် - ၄ င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယေရှုခံစားခဲ့ရသောဆင်းရဲဒုက္ခများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လွှမ်းမိုးခံရသည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ။ ယေရှုနောက်သို့ကျွန်ုပ်တို့လိုက်လိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုနေ့တိုင်းယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆူး ဦး ရစ်သရဖူဆောင်းသင့်ကြောင်းအလွယ်တကူပြောနိုင်ခဲ့သည်ဟုသခင်ယေရှုမိန့်ဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုနှင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရခြင်းကိုအဆက်အသွယ်ပြုသည်။
ကောင်းမှုနှင့်မကောင်းမှုအကြားခြားနားချက်ကိုသိရှိရန်မမှားပါ။ သို့သော်ဆိုးသွမ်းမှုကိုခံစားခြင်းနှင့်အတူမှားယွင်းသောအရာမှာဆူးလမ်းကြောင်း၊ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကြွလာခြင်းကိုယေရှုသတိပြုမိသောကြောင့်ဘုရားသခင်နှင့်ကင်းကွာနေဆဲဖြစ်သောလူသားများသည်ကိုယ်တော်ကိုဆူးများ၊ သေခြင်းများဖြင့်ဖော်ပြခြင်းမှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
သခင်ယေရှုသည်ဤငြင်းပယ်ခြင်းကိုလက်ခံခဲ့သည်။ သူသည်ဆူးများ၏သရဖူကိုလက်ခံခဲ့ပြီးလူအများခံစားနေရသောဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံရန်ခါးသီးသောဖလား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မျက်ရည်ကျသောဤလောကမှသူနှင့်အတူလွတ်မြောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တံခါးဖွင့်နိုင်သည်။ ဒီကမ္ဘာကြီးမှာအစိုးရတွေဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ခေါင်းပေါ်ကိုဆူးချတယ်။ ဤလောက၌ယေရှုသည်ဤဆိုးညစ်သောဆူးများနှင့်ငါတို့အားဤလောကမှရွေးနုတ်ရန်သူတို့၌လုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုခံခဲ့သည်။
Wir alle erfahren unsere Dornenkronen. Wir alle haben unser Kreuz zu tragen. Wir alle leben in dieser gefallenen Welt und haben Anteil an ihrem Schmerz und ihrer Sorge. Aber die Dornenkrone und das Kreuz des Todes haben ihre Entsprechung in Jesus gefunden, der uns auffordert: „Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Selen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht“ (Matthäus 11,28-29) ။